Taxanaha LTZNH ee ugu Fiican Dib-qalooca Ballaca Hal-ka-gal ah oo Mashiinka Centrifugal Fanka kaxeeyo oo aan Lahayn Soo-saaraha iyo Warshadda Volute | Lang Tai
Socodka hawada: min 892.5CFM ～ max 16,660 CFM (1500 m3/h ～ 28,000 m3/h, 52,972.01 ft³/h ~ 98,8810.9 ft³/h)
Cadaadiska taagan: 0.88 ~ 6.02 inches wg (220 ～ 1,500 pa)
Taageerayaasha taxanaha LTZNH waxay leeyihiin faa'iidooyinka cajiibka ah ee soo socda
1. Meel shaqo oo aad u ballaaran oo hufan, jihayn hawo oo lacag la'aan ah;
2. Qaabka adeegsiga wuxuu leeyahay faa'iidooyinka qaab -dhismeedka fudud, mugga yar, culeyska fudud iyo habka rakibidda dabacsan oo fudud;
3. Dib -u -kiciyaha dambe ee leh naqshadeynta la hagaajiyay wuxuu leeyahay hufnaan sare, buuq yar, keydinta tamarta iyo ilaalinta deegaanka.
Codsiga Wareegga Hawada
Taxanahani wuxuu ku habboon yahay dhammaan noocyada kala duwan ee shuruudaha wareegga hawada ee beeraha ganacsiga iyo warshadaha, sida codsiga qolka rinjiyeynta, oo ay ku jiraan dhammaystirka qalabka maaraynta hawada oo leh shuruudo dhaqaaqa hawada oo tayo sare leh.
Taxanahan oo aan lahayn cod -qaadis ayaa sare u qaada cadaadiska sare, waxaa loo adeegsan karaa gudbinta waxqabadka hawo ee habboon ee hawlgallada dib -u -warshadaynta, sida HVAC -ga guud, qaboojinta iyo codsiyada kale ee dhaqdhaqaaqa hawada.
Sida LTZNH560–4 waa daab-gadaal-qaloocsan oo ah taageere qori-keli-keli ah oo wadata mashiinka qumman oo aan lahayn mugdi, dhexroor daab 560mm, baallaha baabuurta 4.
Hore: Taxanaha LTZM Labalaad Kootada Hore usheeda dhexe Drive Fan
Xiga: Taxanaha LTZS Ballaca Hore-qalooca ah Falka Hal-ka-gala ee usheeda dhexe ee Fan-ka-kaxeeya
Fanaanka Garabka Dhinacyada Badan ee Dhinacyada Badan leh
Gadaal Laba Jibaaran Farshaxanka Garabka Badan
Taageere Centrifugal oo dhinacyo badan leh